एक महिला गर्भवती हुँदा, त्यो धेरै परीक्षण पारित र निर्धारित निरीक्षण undergo छ। विभिन्न सिफारिसहरू हरेक expectant आमा दिइएको गर्न सकिन्छ। सबै त्यहि एक स्क्रीनिंग अध्ययन हो। कि यो बारेमा र यस लेखमा छलफल गरिनेछ।
यो विश्लेषण उमेर र सामाजिक स्थिति बिना सबै expectant आमा तोकिएको छ। स्क्रिनिङ अध्ययन सम्पूर्ण गर्भावस्था लागि तीन पटक बाहिर। यो परीक्षण को लागि केही समय सीमा पालन गर्न आवश्यक छ।
छानबिन को चिकित्सा ज्ञात स्क्रिनिङ तरिका, दुई प्रकार मा विभाजित छन् जो। पहिलो को को विश्लेषण छ एक नस देखि रगत। उहाँले भ्रूण मा असामान्यताहरु को एक किसिम को संभावना निर्धारण गर्छ। दोस्रो विश्लेषण - एक अल्ट्रासाउंड स्क्रीनिंग अध्ययन हो। दुवै तरिका को परिणाम आकलन विचार गर्नुपर्छ।
के रोग विश्लेषण प्रकट?
गर्भावस्था को समयमा परीक्षण स्क्रीनिंग छैन निदान सही तरिका हो। यो विश्लेषण मात्र predisposition र जोखिम प्रतिशत सेट प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ। एक विस्तृत परिणाम लागि यो भ्रूण को एक स्क्रीनिंग अध्ययन पूरा गर्न आवश्यक छ। केवल सम्भव विकृति धेरै उच्च जोखिम जब यो काम तोकिएको छ। तसर्थ, यस विश्लेषण निम्न रोगहरु को संभावना प्रकट हुन सक्छ:
डाउन सिन्ड्रोम र एडवर्ड्स।
Patau सिंड्रोम र Cornelia।
Lemley सिंड्रोम स्मिथ-OPITZ।
सम्भव कमजोरीहरू वा तन्त्रिका ट्यूब को असामान्य विकास।
जब तोकिएको विश्लेषण?
पहिले नै उल्लेख रूपमा, स्क्रिनिङ परीक्षण गर्भावस्था को समयमा तीन पटक प्रदर्शन गरिएको छ। यस मामला मा, एक रगत परीक्षण दुई पटक मात्र गरेको छ। त्यहाँ जाँच पार गर्न आवश्यक छ, जो मा केहि मिति छन्।
पहिलो trimester को स्क्रीनिंग भ्रूण विकास चौधौँ सप्ताह गर्न एघारौँ तोकिएको छ। दोस्रो सर्वेक्षण बीस-दोस्रो हप्ता गर्न बीसौँ देखि अवधिमा जान आवश्यक छ। तेस्रो अल्ट्रासाउंड स्क्रीनिंग अध्ययन गर्भावस्था को तीस-दोस्रो र तीस-चौथो हप्ता के गर्न आवश्यक छ।
को समय सीमा कुनै पनि विचलन गलत परिणाम दिन सक्छ। कि यो राम्रो छ किन मिति आफ्नै विश्लेषण मा सार्न, र चिकित्सक गणना को आचरण भरोसा छ।
आमा को लागि सबैभन्दा रोचक समय अल्ट्रासाउंड परीक्षा स्क्रीनिंग र रगत परीक्षण को परिणाम प्राप्त को पहिलो प्रोटोकल छ। यो अघि सामान्यतया थप अल्ट्रासाउंड तोकिएको छैन भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ। यो एक महिला पहिलो बच्चा एकाइ को स्क्रिनमा देख्नुहुन्छ भन्ने हो।
पहिले नै उल्लेख रूपमा, पहिलो सर्वेक्षण को अवधि बाहिर अवधिमा 11 औं देखि गर्भावस्था को 14 औं हप्ताको लगे गर्न सकिन्छ, तर, सुरुमा 13 12 देखि विश्लेषण सञ्चालन गर्न बेहतर, महिला रगत दान गर्न हुनेछ। विश्लेषण कडाई उपवास सञ्चालन गरिएको छ। बार सामाग्री एक नस देखि गरे। पूर्व expectant आमा आफ्नो उमेर, गर्भावस्था र अघिल्लो जन्मेका (कुनै छ भने) को पाठ्यक्रम संकेत जो प्रश्नावली, मा भरिन्छ।
अर्को, परिणाम सामाग्री टेक्नीसियन जाँच्ने र सम्भावित भ्रूण malformations निशान। कम्प्युटर सबै डाटा प्रक्रियाहरु र अन्तिम परिणाम रू। यो सबै उमेरका लागि जोखिम धेरै फरक हुन सक्छ कि टिप्पण लायक छ।
रगत दिएपछि एक महिला अल्ट्रासाउंड undergo गर्नुपर्छ। योनी सेन्सर वा पेट पर्खाल मार्फत: प्रक्रिया दुई तरिकामा बाहिर हुन सक्छ। सबै को अल्ट्रासाउंड उपकरण, डाक्टर योग्यता र निर्भर Gestational उमेर।
परीक्षा समयमा, डाक्टर भ्रूण को विकास उपाय, को placenta को विशेष स्थान भने। साथै, डाक्टर बच्चा सबै limbs छ भनेर पक्का गर्नुपर्छ। महत्वपूर्ण अंक को एक नाक हड्डी र उपस्थिति छ nuchal पारभासकता। यी अंक छ र परिणाम व्याख्या गर्दा पछि डाक्टर आउनुहुनेछ।
यस मामला मा गर्भावस्था को समयमा स्क्रिनिङ परीक्षण पनि दुई तरिकामा गरेको छ। पहिलो, एक महिला एक नस देखि एक रक्त परीक्षण हुनुपर्छ, र मात्र त एक अल्ट्रासाउंड पारित। यो निदान लागि समय सीमा केहि भिन्न छन् भनेर टिप्पण लायक छ।
दोस्रो स्क्रिनिङ लागि रगतको विश्लेषण
देश को केही क्षेत्रहरु मा यो अध्ययन सञ्चालन गर्दैन। मात्र अपवाद पहिलो विश्लेषण निराशाजनक परिणाम दिए गर्नेहरूलाई महिला छन्। यस मामला मा, रगतको दान लागि सबैभन्दा अनुकूल अवधि भ्रूण विकास 16 18 सप्ताह को दायरा छ।
परीक्षण पहिलो मामला मा जस्तै हो। डाटा प्रोसेसिंग कम्प्युटर र परिणाम रू।
यो परीक्षा 20 22 सप्ताह को अवधिका लागि सिफारिस गरिएको छ। यो एक रक्त परीक्षण विपरीत, यो अध्ययन देश को सबै चिकित्सा संस्थानहरुमा बाहिर छ, कि टिप्पण लायक छ। यो चरण मा, मापन उचाइ, भ्रूण को वजन। हृदय, मस्तिष्क, पेट नजन्मेको बच्चा: साथै, डाक्टर अंगहरु जाँच्ने। विशेषज्ञ गणना औंलाहरु र औंलाहरूको crumbs आयोजित। यो placenta र cervix अवस्था याद गर्नुहोस् महत्त्वपूर्ण पनि छ। साथै, यो डपलर आयोजित हुन सक्छ। यो परीक्षा समयमा डाक्टर रगत प्रवाह अनुगमन र सम्भव कमजोरीहरू टिप्पणी।
दोस्रो अल्ट्रासाउंड स्क्रिनिङ समयमा पानी जाँच्न आवश्यक छ। त्यहाँ दिइएको अवधिको लागि एक सामान्य हुनुपर्छ। को झिल्ली भित्र कुरा र अशुद्धताओं निलम्बित हुनु हुँदैन।
निदान यस प्रकारको पछि गरिन्छ गर्भावस्था को 30 सप्ताह। सबैभन्दा उपयुक्त अवधि 32-34 सप्ताह छ। यो चरण मा अब भरिएको मा रगत जाँच्न, तर केवल एक अल्ट्रासाउंड निदान कि टिप्पण लायक छ।
डाक्टर हेरफेर समयमा ध्यान दिएर भविष्यमा बच्चा को अंगहरु जाँच्ने र तिनीहरूको सुविधाहरू टिप्पणी। को crumbs को उचाई र तौल पनि मापन गरिएको छ। अर्को महत्वपूर्ण कुरा अध्ययन बेला सामान्य शारीरिक गतिविधि छ। विशेषज्ञ टिप्पणी amniotic तरल पदार्थ र यसको शुद्धता को राशि। प्रोटोकल को स्थिति, स्थान र placenta को परिपक्वता संकेत निश्चित हुनुहोस्।
प्रायजसो यो अल्ट्रासाउंड, नवीनतम छ। केही अवस्थामा मात्र जन्म अघि निदान पुन: नियुक्त। किन यो भ्रूण (टाउको वा breech) र कर्ड इन्ट्याङ्गलमे को कमी को स्थिति ध्यान दिनुहोस् महत्त्वपूर्ण छ भन्ने छ।
परीक्षण समयमा विचलन र त्रुटिहरू को एक किसिम पहिचान थियो भने, डाक्टर जेनेटिक्स जस्तो सुझाव। को स्वागत मा, एक विशेषज्ञ एक निश्चित निदान सेट गर्दा खातामा सबै डाटा (अल्ट्रासाउंड, रगत र विशेष गरी गर्भवती) लिनुपर्छ।
प्रायजसो, जोखिम छैन बच्चा बिरामी पैदा हुनेछ कि एक ग्यारेन्टी हो। अक्सर यी अध्ययन गलत हो, तर बावजुद, डाक्टर थप अनुसन्धान सिफारिस हुन सक्छ।
एक विस्तृत विश्लेषण गर्भनाल देखि amniotic तरल पदार्थ वा रगतको microflora एक स्क्रीनिंग अध्ययन हो। यो विश्लेषण नकारात्मक परिणाम निम्त्याउँछ भन्ने उल्लेख गर्नुपर्छ। एकदम अक्सर, यस्तो अनुसन्धान पछि खडा गर्भावस्था को समापन को खतरा। हरेक महिला यस्तो निदान इन्कार गर्ने अधिकार छ, तर यो मामला मा सम्पूर्ण जिम्मेवारी उनको काँध पर्छ। डाक्टर को खराब परिणाम पुष्टि मा गर्भपतन बनाउन र एक निर्णय गर्ने महिला समय दिन सुझाव।
गर्भावस्था को समयमा परीक्षण स्क्रीनिंग एक धेरै महत्त्वपूर्ण परीक्षण छ। तर, हामी सधैं सही छ भनेर बिर्सन हुँदैन।
नवजात स्क्रीनिंग को जन्म बिल्कुल छ जो बच्चा, मा आयोजित गरिनेछ पछि, दाँया रोग उपस्थिति वा अनुपस्थितिले देखाउँछ।
Nikolai Amosov: जीवनी, फोटो र रोचक तथ्य
अग्न्याशय दुख्छ ... अलार्म ध्वनि समय!
रगतमा platelets कम स्तर: कारणहरू र सुधार गर्ने
Osteopathy Mokhova ठेगाना संस्थान, समीक्षा। Osteopathy - यो निको पार्नुहुन्छ कि के हो?
औषधि "Converse" - analogous गर्न "Prestarium"
बाथरूम मा underfloor ताप: प्रकार र स्थापना को सुविधाहरू
जो नस्ल संसारको सबैभन्दा सुन्दर कुकुर पर्छ
कसरी वाशिंग मिसिन को ड्रम देखि असर हटाउन? वाशिंग मिसिन, स्पेयर पार्ट्स को मर्मत
तिनीहरूले समाजमा के भन्न छैन? को लेबिया राता।
Pogankiny च्याम्बर पेस्कोभ: फोटो, ठेगाना, शीर्षकमाथिको घण्टा